Zọ gasị Google Maps ga-esi nweta ihu ọma | Gam akporosis
Google Maps na-anwale interface ọhụrụ maka ụzọ nhọrọ
Ọ bụghị ọtụtụ Oge ụfọdụ anyị na-a attentiona ntị na ụzọ nhọrọ ndị Google Maps na-enye, na ikekwe n’ihi na ọ bụghị na ahụmịhe ahụ na-enye ya. Ọ bụ mgbanwe dị ukwuu na ule nke ngwa Google map na-arụ.
Ma na Google Maps bu na-anwale ụfọdụ ihe ọhụrụ na UI maka ụzọ nhọrọ; maka ngwa dị mkpa na obodo iji zere nsogbu okporo ụzọ na-eme n'ụzọ ndị anyị na-emebu.
Mgbe m matara nnukwu ozi ọma ahụ kewaa ihuenyo na abụọ ma nwee ike iji Street Street n'otu oge dị ka map na ụzọ, ugbu a Google Maps na-abịakwute anyị na ihe ọhụrụ dị na ule ule ọ dịkwa mma.
Site na ndị mmepe XDA ha achọpụtala na ngbanwe ahụ na ntanetị maka ụzọ nhọrọ ndị ahụ Maps na-ewetara anyị mgbe anyị na-agagharị na ọnọdụ. Echere m, ihe anyị ga-echere site na ihe nkesa iji nwee ike ịnụ ụtọ ya na ekwentị anyị.
Nnukwu ihe dị iche bụ na kaadị ahụ na-ese n'elu mmiri nke na-egosi ebe anyị si apụ na ebe njedebe. Na mbụ, ma ọ bụ ugbu a, a gbara ogige abụọ ahụ n'otu interface ahụ n'elu. Ugbu a ọ na-ewe obere ohere ịhapụ maka maapụ ahụ, yabụ anyị nwere ike ikwu na ahụmịhe ahụ kachasị nke ọma.
Dị ka emezigharị taabụ na elu ya dị n'okpuru ebe a na-aga ebe, iji nyefee ha na ndepụta nke kaadị na ala na nke anyị nwere ike iji anya nke uche hụ.
Enwere bọtịnụ nhọrọ ọzọ dị mma nke na-enye anyị ohere ịgbanwe usoro ịme anwansị na mgbochi okporo ụzọ. Ugbu a, ka anyị chere maka nke a ọhụrụ na interface nke nhọrọ ụzọ gasị nke Google Maps.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Google Maps na-anwale interface ọhụrụ maka ụzọ nhọrọ